IIFOTTO EZINGAMA-30 ZE-FSU ZAMADODA- IIMBONO ZOYILO LWEDYUNIVESITHI YASEFLORIDA - UHLOBO
Eyona Tequila ilungileyo iphantsi kwe- $ 50 ukuzama ngo-2021
I-10 ye-Best Music Biopics yexesha lonke
Iifotto ezingama-30 ze-FSU zamadoda- Iimbono zoyilo lweDyunivesithi yaseFlorida
Yeyiphi indlela ebhetele yokubonisa i-fandom yakho kwiDyunivesithi yaseFlorida State kunokwenza i-tattoo yesikhumbuzo? Eyasungulwa ngendlela ebuyayo ngo-1851, i-FSU liziko lemfundo elidala kunabo bonke eFlorida, iyenza ukuba ibe yimbali njengoko iyothusa.
Ikhampasi yaseyunivesithi iqulethe iikholeji ezili-16, kwaye ithathwa njengeyona ndawo iphambili yophando.
IYunivesithi yaseFlorida State ilikhaya eFlorida kuphela kunye nelabhoratri kuphela, eyenza iyunivesithi isike kakuhle xa kufikwa kumabala e-STEM.
I-FSU ilikhaya kwiinkqubo ezininzi ezikwinqanaba lesizwe kwiindawo ezininzi, kubandakanya umthetho kunye nesayensi kunye neqonga kunye nomculo. IYunivesithi yaseFlorida State ikhokelela eFlorida kwizifundo ezine kwezisibhozo ze-STEM. Kutheni ungafumani laurels kunye neetotshi zeDyunivesithi yaseFlorida State tattoo emzimbeni wakho xa ujonga yonke imbali esi sikolo esikwaziyo ukuyifeza kwimbali yaso ende nehlonitshwayo?
I-FSU isungule umkhankaso wokunyusa i-1 yezigidigidi zeedola ukuqhubela phambili abafundi bayo kunye nekharityhulamu. Isikolo sele siphakamise i-938 yezigidi zeedola kunye notshintsho. IYunivesithi yaseFlorida State ibaluleke kakhulu kwezemidlalo, nto leyo enokuba sisizathu esinye sokwenza ukuba babhalwe emzimbeni wakho ngokwakho. Bakhuphisana kwi-NCAA kwaye baye bakhuphisana kwibhasikithi nakwibhola ekhatywayo. I-FSU ihlala ikhetheke kakhulu kwiitattoos.
unyaka wokuzalwa umvambo engalweni
yenyuka emnyama kunye nomvambo ompunga
UMichael B. Jordan Uya eRouge 'Ngaphandle Kokuzisola'
Uyilo lweTatoo ezingama-30 zaMadoda-Iingcinga ze-Inki yezixhobo
Ushicilelo olunqunyelwe lukaSuntory Yamazaki Iminyaka engama-55 ubudala iya kwiHlabathi liphela
Yintoni Utata umnqwazi? Yonke into ekufuneka uyazi
Iimbono ezingama-50 eziGqwesileyo zeGumbi lokuPhila lale mihla-iiYilo zangoku
Iibhotshi zoMsebenzi eziPhambili ezingama-20 eziPhambili zaMadoda-Isinyathelo esiya kuhlala ixesha elide
Izibane ezikhokelwayo kwiindonga zeshawari
I tattoo yentlanzi ye-koi yendoda
hamba kwiimbono zeofisi
Umkhono we tattoo ngeendlela ezahlukeneyo
idesika eyakhelweyo kunye nezicwangciso zeeshelfu
Iitatto zesandla esipholileyo kubafana